वाइन "Pirosmani" - एक गिलास मा Georgia घाम
जोरजियन winemakers सबै दुनिया भर आफ्नो कला जितेको छु। पुरानो रक्सी परम्परा पुस्ता देखि पुस्ता गर्न सौर पहाडी देश मा प्रसारित। बस religiously पूजा र आधारको रूपमा रक्सी-बढ्दै परम्परा राखिएको, राम्रो रक्सी को उच्च गुणवत्ता कच्चा माल सधैं।
लगभग सबै आफ्नो क्षेत्रहरू छोएर, सबै पक्षले हाम्रो जीवन मा भित्र पस्नु नयाँ प्रविधिहरू। तर पुराना जोरजियन रक्सी छ अब एक सताब्दी अघि जस्तै तरिकामा उत्पादन। वाइन "Pirosmani" यो पेय सम्म आफ्नो पैतृक Georgia परे प्रसिद्ध छ, सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू बुझाउँछ। र व्यर्थमा! आखिर, यो अझै पनि पूर्ण छ: र फूलगुच्छा र स्वाद र बाक्लो माणिक रंग। यो रक्सी को एक बोतल - यो छैन Solemn अवसरको लागि रक्सीको बस योग्य हुनुहुन्छ। यो एक छुट्टी को लागि एक राम्रो उपहार वा पुरानो परम्परा एउटा आदर हुन सक्छ।
जोरजियन रक्सी को आधार - पुर्खाहरूको सम्पदाको आदर। उनको लागि धन्यवाद, वर्षौंदेखि रक्सी महिमा फीका छैन। कम्पनी "Vaziani" यस्तो उत्पादकहरु गर्न विशेष बुझाउँछ। यो 1982 मा स्थापित भएको थियो। रक्सी तहखाने निर्माता Georgia मा "Marani" भनिन्छ, को XV शताब्दीको दोस्रो आधा बनाए। क्लासिक पुरानो व्यञ्जनहरु - यो कम्पनीको उत्पादन प्रविधिको कोर मा। "Pirosmani" सहित ठीक वाइन, तयार र kvevri भण्डार - अद्वितीय बर्तन।
2012 देखि, उत्पादन र टाउको कार्यालय एक आश्चर्यजनक राम्रो रक्सी जन्म दिने, शताब्दीयौंदेखि किनारा लागि प्रतिष्ठा छ जो Kakheti क्षेत्रमा Telavi को शहर मा अवस्थित छ।
Alazani उपत्यका देशी
त्यहाँ असाधारण जोरजियन अंगूर उपत्यका हो। 4000 देखि Alazan उपत्यकाका मानिसहरूलाई ज्ञात अंगूर प्रजातिहरू 550. भएको जलवायु सिद्ध छ हुर्किसकेका छ, अङ्गुर चाँडै रस पोखे। रूपमा बिस्तारै र majestically, एक मयूर गरेको पुच्छर, कम्पनी को लोगो मा चित्रण गरिएको जस्तै रक्सी फूल को गुच्छा। वाइन "Pirosmani" यस्तो अङ्गुर देखि तयार छ। "Saperavi", यसको गुणहरू लागि प्रसिद्ध - यसको हृदय मा। अङ्गुर को गढ को आवश्यक स्तरमा बीउ र खाल संग लक्षविना हिड्नु बाँकी को क्लस्टर देखि एक पटक विभाजित। को किण्वन प्रक्रिया wort ठंडा को माध्यम द्वारा रोकियो। कि पछि, रक्सी बचाव र pasteurization प्रक्रिया बित्दै छ। खैर, यो अंगूर विविधता तयार छ र अन्य कुलीन Georgia को वाइन।
स्वाद र रंग
विशेषज्ञहरु रक्सी छ कि "Pirosmani" एक तीव्र रातो गारनेट रंग छ भन्छन्। यी मदिरा धेरै किसिमहरु लागि पारंपरिक नभई रंग "Pirosmani" चिसो बैजनी impurity छ।
रक्सी को औसत घनत्व, यो बिस्तारै तल ग्लास को पर्खालहरु, एक निशान छोडेर बग्छ।
हामी पूर्ण, धनी स्पष्ट चेरी टिप्पणीहरू महसुस जो फूलगुच्छा, पिउन। केही connoisseurs ब्रांडीको मा चेरी को पनि स्वाद भन्छन्।
pitcher देखि वाइन
आज, रक्सी मात्र भण्डारण गरिएको छैन र कारखाना मा माटो मा infused, तर कहिले काँही उही र यसलाई बेचे। धेरै जोरजियन मदिरा reminiscent पुरानो, हात-गरे को, असामान्य व्यञ्जन मा छन्। "Pirosmani" दुई अद्वितीय बोतल विकास गरिएको छ को लागि - शास्त्रीय फारम र एकदम असामान्य, चपटे, स्टक्को संग सजाया।
को जार देख, तपाईंलाई लाग्छ सक्छ घाम पहाड उपत्यकाका कहीं आफ्नो sculpted पटर छ। निस्सन्देह, यो उत्पादन टाढा हरेक रक्सी पसलमा पतन, र यो अपेक्षाकृत सस्तो लागत।
Niko Pirosmani र आफ्नो चित्रहरु
सधैं प्रत्येक रक्सी वरिपरि उभिरहेका भरिएको थियो जो अर्को पौराणिक कथा, आफ्नो नाम आउँछ। आफ्नो नाम रक्सी अन्तिम दुई शताब्दीअघि को पालो मा बस्ने जो जोरजियन primitivist चित्रकार, पछि नाम छ।
Niko Pirosmani चित्रहरु अक्सर eponymous रक्सी लेबल सजाउनु प्रयोग गरिन्छ। प्रजनन अक्सर भित्री bodegas र रेस्टुरेन्ट संसारभरि जोरजियन भोजन मा उपस्थित छन्।
कलाकार रक्सी को परम्परा र ती क्षेत्रहरु आतिथ्य र सरलता मा परम्परागत आफ्नो सिर्जनाहरू र Georgia को अद्भुत पहाड वातावरण र वफादार गाए। उहाँले छोयो र लक्ष्य बलियो डिग्री छैन जब, राम्रो रक्सी को खपत को संस्कृति, र स्वाद र सुगन्ध शीर्षकहरू। र, को पाठ्यक्रम, जस्तै-दिमाग, सक्षम को राम्रो कम्पनी महान पेय को आनन्दको साझेदारी गर्न।
परंपरागत, रातो अर्ध-सुक्खा रक्सी ग्रील्ड मासु संग सेवा छ। नियममा "रातो -। रातो" वाइन "Pirosmani", समीक्षा जो धनी स्वाद र सुन्दर सुगन्ध, हिरन को मासु, मासु, पोर्क लागि पूर्ण मनाउन।
फल यो रक्सी सेवा गर्छन्। धेरै नै अङ्गुर संग रोचक संयोजन। राम्रो रंग चेरी र दारिम bouquet। छैन यसलाई overshadow, र खट्टे फल।
यी पनीरों यो रक्सी परम्परागत प्रार्य गठन पनीरों र घर केक संग राम्रो जान्छ।
परंपरागत मिठाईहरू सामान्यतया मीठो वाइन सेवा गर्दै हुनत, "Pirosmani" क्रीम र चकलेट केक संग संयुक्त छ। यो रक्सी र पागल लागि उपयुक्त।
प्राथमिकतालाई सेवा माथिको tapered घाँटी संग उच्च रक्सी चश्मा गर्न दिनुपर्छ। यो फूलगुच्छा खोल्न अप मदत गर्न राम्रो छ र तपाईं ग्लास मा रक्सी को अचम्मको रंग आनन्द दिन्छ। 17-19 सी मा chilled यो रक्सी पिउन
राम्रो रक्सी कसरी चयन गर्न
"Pirosmani", को पाठ्यक्रम, "विधवा Clicquot" को मूल्य को लागि सामान्य Cahors भन्दा बढी मूल्य contend छ छैन, तर अझै पनि। यो विविधता मूल्य यो तदनुसार, उच्च गुणस्तर मानिन्छ। त्यसैले नक्कली। तपाईं एक अद्भुत घाम रक्सी प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, गम्भीर खरीद ले। सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्।
पहिले, सबै रक्सी को निर्यात मा उत्पादन, को आयात देश को आधिकारिक भाषा बाहेक, यो लेबल मा जोरजियन पाठ समावेश गर्नुपर्छ। दोश्रो, एक राम्रो रक्सी पसल सधैं आफ्नो सबै सामान लागि प्रमाणपत्र छ। तेश्रो, pass- ध्यान। साथै, किन्न भेटी शंकास्पद व्यापारीहरु भर छैन, "ठीक, तर आधा मूल्य।"
नीलो अंगूर देखि घर मा वाइन। रक्सी को उत्पादन
यदि रक्सी लक्षविना हिड्नु छैन, के गर्ने? रक्सी कसरी सुरक्षित गर्न?
छुट्टी तालिका सजावट - chokeberry देखि वाइन।
वोदका "अर्कह्याङ्गेल्स्क उत्तरी जोखिम।": समीक्षा र वर्णन
भर बरफ संग ककटेल: यो के हो, व्यञ्जनहरु
ककटेल "रोगनाशक ओषधि": संरचना, नुस्खा, पकाउने नियम
Capricious चिनियाँ कसरी गुलाब - घर राख्न सम्भव छ
त्यो सपना पुस्तक बताउँछ? भ्यागुता सपना गर्न ...
लेखक दिमित्री Balashov: जीवनी, रचनात्मकता
स्ट्राइकर "एके बार" Anton Glinkin इतिहास क्यारियर पथ
Sanatorium "Altai Castle": फोटो, वर्णन, पर्यटकहरूको समीक्षा
लागि (Java) चक्र अनन्त
विज्ञापन को प्रभाव मूल्याङ्कन: जब, किन र कसरी
हाम्रो तालिकाको लागि असामान्य पकवान - आलु पाइ
कैडटों - यो औषधीले कि? कार्य र लागूपदार्थ glucocorticosteroids को प्रभाव
Froyanov इतिहासकार इगोर वाई .: जीवनी, वैज्ञानिक काम र रोचक तथ्य
सपा बन्द विशेषताहरू
टाटा एक्सेन्ट: प्राविधिक विशेषताहरु, बाहिरी र भित्री। छोटकरीमा, रिलिज मोडेल